Soomaalida degan Minnesota oo lacagtoodii kala baxay bangiyo ku yaala Minneapolis
Soomaalida degan Minnesota oo lacagtoodii kala baxay bangiyo ku yaala Minneapolis	Last Updated on Saturday, 12 May 2012 17:12	Saturday, 12 May 2012 16:41	Soomaalida degan gobolka Minnesota ayaa shalay ku banaanbaxay bangiyada Wells Fargo iyo US Bank ee ku yaala magaalada Minneapolis. Waxay kala baxeen lacagtii u taalay bangiyadaas. Waxaa Soomaalida kala qeyb-galay banaanbaxa community-ga Hispanica, Indianka iyo Mareykan farabadan. Waxaa kaloo kala qeyb-galay oo qeyb libaax ka qaatay urur weyn oo Mareykan ah oo ay ku mideysanyihiin daladna u ah ururo badan. Ururada waxaa ka mid ah CTUL oo ku hadla afka hispanica, Somali Action Alliance oo ku hadla afka Soomaalida, ISAIAH oo ku hadla afka kaniisadaha, urur u hadla Jewish Community-ga, NOC oo ku hadla afka African American-ka, iyo urur u hadla Native American-ka.
Bangiyadan waxay diideen in ay la shaqeeyaan xawaaladaha Soomaalida. Sababtaas ayaa keentay in lagu banaanbaxo oo lacagta lagala baxo. Ururka CTUL waxay xireen accountigii ay bangiga ku lahaayeen. Waxay kala baxeen lacag gaareysa $70 kun. Ururo kale iyo dad farabadan ayaa iyagana xiray accountiyadii ay ku lahaayeen bangiyadan.
Minneapolis Public Schools ayaa la filayaa in ay iyagana joojiyaan xiriirkii kala dhexeeyay bangiga. Lacag gaareysa $20 million ayaa bil walba kaga timaada iskoolada Minneapolis. Dad farabadan ayaa garab taagnaa Soomaalida oo ka xun go’aanada ay bangiyadan qaateen. Waxaa loo xiray wadooyinka gala downtown Minneapolis.
Soomaalida Soomaaliya joogta waxay ku tiirsanyihiin lacagta kaga timaada qurba joogtooda. $1.6 Billion ayaa Soomaalia gasha bil walba. Lacag ka badan $120 million ayaa loo malaynayaa in ay diraan Soomaalida Mareykanka.